Akụkụ nke glacier: njirimara na nhazi | Netwọk Mgbasa Ozi
Akụkụ nke glacier
Glaciers bụ nnukwu mmiri ice ice nke kpụrụ n'ihi nchịkọta, mkpokọta na njikwa nke snow kemgbe ọtụtụ afọ. Nnukwu ice a agbapụtaghachilarị ma nwee ike ịgbada n'ugwu, na-ewuli ihe enyemaka a maara dị ka ndagwurugwu ice. Ha nwere ike ịwasị mgbawa E nwere ụfọdụ usoro inyegoro ịmụ nwa mmiri mmiri dịka osimiri, ọdọ mmiri na ọdọ mmiri. Taa, anyị ga-elekwasị anya n'ịmụ ihe dị iche iche akụkụ nke glacier.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe bụ akụkụ nke glacier na ihe bụ isi njirimara ya.
1 Glacier guzobere
2 Akụkụ nke glacier
2.1 Mpempe akwụkwọ
2.2 Ebe nkwụsị
2.3 Asụsụ agbụrụ
3 Moraine nke Glacial
3.1 Akụkụ nke glacier: ọnụ
A na-eme atụmatụ na 10% nke elu ụwa kpuchiri glaciers. Usoro okike ndị a dị mkpa kemgbe 75% nke mmiri ọ freshụ world'sụ nke ụwa ka ejidere. Na mgbakwunye, glaciers ndị a na-arụ ọrụ dị mkpa na mgbanwe nke mgbanwe ihu igwe gburugburu ụwa. A na-akpọ usoro nke na-eduga n'ịmepụta glacier dị ka glaciation. Usoro a nwere nchịkọta na-adịgide adịgide nke snow mgbe niile. Snow a dara na mpaghara enyere n'oge obere oge. Ihu igwe nke mpaghara a ga-enwerịrị ike itinye aka na usoro a.
Ọ bụrụ na okpomọkụ nke afọ ọ bụla na-akawanye oge, glacier agaghị enwe ike ịmalite dị ka nke a. Nke a bụ n'ihi na okpomọkụ nke oge na-ekpo ọkụ na-eme ka snow gbazee. Ọnọdụ ihu igwe dị ugbu a ga-enwerịrị okpomọkụ dị ala nke na-egbochi ọdịnaya ịgbagha na oge mgbe ịrị elu nke okpomọkụ. Glacier ibu na-eme site na-agbakwunye snow na oge snowfall. E nwekwara oge dị iche iche mgbe icing na-apụta ọtụtụ oge. Ya mere, enwere ike ịsị na snow na-agbanwe site na ebe oyi. Ọ bụ ebe a ka a gbanwere usoro ya ma kpụzie ya iji nweta njupụta dị elu n'ihi ya.
Glaciers na-enwe nguzozi nke nhazi na ọnwụ nke oke. Zọ nke ha ga-efufu ihe ga-agbaze mmiri a na ice, sublimation na dismemberment of icebergs. Igwe mmiri a na-agbakwụnye na-agbanwe agbanwe mgbe niile na akụkụ ndị ọzọ nke usoro mmiri. Akụkụ kasị ala nke glacier bụ na mmekọrịta na-aga n'ihu na ihu ụwa ma na-eme ka glacier na-agagharị. Akara dị n'etiti oke uru na ọghọm nke glacier bụ ihe amụrụ dị ka ihe buru ibu. Ọ bụrụ na oke nguzo nwere nsonaazụ dị mma, glacier a ga-abawanye na nha. N’aka ozo, oburu na onwere ihe n’adighi nma oga adi ya gaa na-ekewa n'ike n'ike ruo mgbe ọ ga-apụ n'anya.
Anyị ga-enyocha otu otu nke bụ akụkụ bụ isi nke glacier.
A na-amara ha aha nke glacial cirque ma ọ bụ ịda mba nke na-apụta na mmetụta nke mbuba glacial. Ọnọdụ a nke glacial na-adị n’elu mgbidi ugwu wee bụrụ isi iyi nke ndagwurugwu. N’ebe a niile ka igwe snoo na-ada site na mmiri zoo. Snow a ga-eji nwayọ ghọọ ice ma wepụta usoro nri glacier n'oge kachasi elu.
N'adịghị iche nke na-eme na nchịkọta aria, nke a bụ mpaghara nke ọnwụ ice na snow na-apụta. Tumadi ụdị zụlitere site na omume ma ọ bụ gbazee. Na nke a nke glacier na uka itule bụ adịghị mma. Nke a pụtara na ọnụọgụ ọkụ ice karịrị nke nchịkọta ya. Ice na-eche na ọ ga-efu na njikọ na sublimation yana site na mkpochapụ nke nnukwu mmadụ. Ntughari a putara ihe site na ngbata nke glacier rue ogo nke ime. Ntughari a gaa n'ebe di elu na-eme ka nkpuchi nke moraine gaa n'elu ebe a ga-etinye glacier nwụrụ anwụ.
Asụsụ glacial bụ mpaghara mebere igwe kpụkọrọ akpụkọ na-agbadata n'ihi oke ndọda. N'ihi ya, nke a na - ebute oke nkume nke na - eme ka e guzobe ego nke ejiri aha moraines mara. N'ebe a enwere oke mbuze na nguzobe nke ihe enyemaka nke icho.
Moraine nke Glacial
Ọ bụ akụkụ ọzọ nke glacier na-atọ ụtọ ịmụ ihe. A maara ya dị ka ugwu ugwu nke nwere ihe nwere mmiri kpụkọrọ adọka. Ha na-tumadi ekewet nke till. Ihe ndị a bụ ihe efu karịa nsị nke na-ada site na mbuze nke glacier na-akpata ka ọ na-agagharị na mbara ala. Enwere moraine glacial dị iche iche dịka ụfọdụ njirimara si dị. Ka anyị lee ihe ha bụ:
Moraine nke njedebe: O bu udi moraine nke ihe mebere iberibe okwute. E wepụrụ iberibe okwute ndị a tupu oge eruo ma debe ha na njedebe nke glacier. Ice na-anọgide na-aga n'ihu mgbe ọ na-akwagharị ebe a na-etinye nkume. Nke a bụ ebe moraine dị. Ejikọtara nguzo nke moraine a na agbaze na evaporation nke ice. Usoro ndị a na-eme na njedebe nke glacier na ọsọ ọsọ dịka ọganihu nke glacier na mpaghara nri ya.
Ndabere moraine: ọ bụ akụkụ ọzọ nke glasia mejupụtara nkume sedimenti. A na-edebe ihe ndị a mgbe ice na-adịgide adịgide. Thelaghachi azụ nke glacier na-ewere ọnọdụ, mmetụta nke imeri ablation na nchịkọta. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị tufuo ice karịa ka ọ na-agbakọ. Nke a na-eme ka sedimentation usoro nke feeder belt ka a hụrụ n'otu oge. Belt a bụ ọrụ maka ịhapụ nkwụnye nke sedimenti glacial n'ụdị mbara ala na-adịghị edozi.
Moraine dị n'akụkụ: bu nke emeputara site na slide nke glacier. Ha na-adịkarị na ndagwurugwu ugwu ha na njem ha siri ike na-ebili na mgbidi nke ndagwurugwu ebe ọ dị. Ntughari a na - eme ka ahihia ahihia echekwa na akuku.
Central Moraine: ọ bụ otu n'ime akụkụ nke glacier nke naanị a hụrụ na alpine glaciers. Nhazi ya bụ mmetụta nke njikọ dị n'etiti glaciers 2 nke mejupụtara otu iyi mmiri.
Moraine nkpuchi: Ha bụ ndị edoziworo n'elu akwa glacier ma mejupụtara ya na akụrụngwa akụrụngwa.
Akụkụ nke glacier: ọnụ
Ọ bụ mpaghara ikpeazụ nke glacier ma mejupụtara ya na nsọtụ ala ya. N'ebe a, imebi mmadu buru ibu kari kari ma obu ebe glacier ji agwụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere akụkụ nke glacier.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Akụkụ nke glacier
Usoro nke mbara ala